जिन्दगीको शून्य समय ! – Sthaniya Patra
जिन्दगीको यो शून्य समयमा बसेर हामीले सोच्नुपर्नेमध्ये अबको बाटो मुख्य कुरा हो । नयाँ परिवेशमा जीवनलाई कसरी सहज बनाउने ? आफूले विगतमा गरिरहेको काम अहिलेको अवस्थामा सही होला कि नहोला ? जीवन धान्नका लागि काम त गर्नैपर्छ तर के गर्ने ? कुन पेशा ब्यवसाय अँगाल्ने ? यो ६ महिनाको अवधिमा धेरै मानिसहरू शून्यमा झरेका छन् । शून्यबाट माथि कसरी अङ्कहरू थप्दै जाने ? काममा मात्र होइन कतिको भावना र मानसिकतामा पनि क्षति पुगेको छ । त्यसलाई कसरी सामान्य बनाउने ? अहिले जे भइरहेको छ त्यसलाई शून्य समय ठानेर कसरी अगाडि बढ्ने ? तयारी आवश्यक छ ।………………Ghatana ra bichar